5 Best Positions si loo furo Xisaab Dhexe
5 Sababaha ugu Fiican ee Loo Furo Xisaab Bangi
Sababaha ugu sarreeya ee 5 ee loogu talagalay koontada bangi ee dibedda waa kuwan soo socda:
Bixinta ilaalinta hantida ee dacwooyinka
Bixinta kala duwanaanta hantida
Bangiyada xooggan (fiiri hoosta caddaynta)
Hoos u dhigida nuglaanta
Sababahan oo dhami waa asaaska aasaasiga u ah faylalka tacliimeed ee caafimaad qaba. Ma jiraan wax cusub oo ku saabsan macluumaadkan. LAAKIIN, Bilow inaad isku xidho walxaha aasaasiga ah ee dhaqaalahaaga shakhsi ahaaneed iyo jawiga ku qanacsan-dacwadda. Ka dib fiiri xaaladda adduunka maanta. Iftiinkaas, 5 sababaha ugu waaweyn ee sababta ah bangiga badda waa mid caan ah oo macno badan samayn doona.
"Haddii ay jiraan hal eray waxaan doonayaa inaan kaa tago maanta, waa tan ... Glocal." -Natalie Keener oo ka soo jeeda filimka Up at Air ah
Sababaha 5 Sababaha Bankiyada Dhulka
1. Bixinta Ilaalinta Hantida
Mareykanku wuxuu leeyahay kaliya 4.4% dadka adduunka. Si la yaab leh, si kastaba ha noqotee, waxay leedahay 80% qareennada adduunka iyo 96% dhammaan dacwadaha adduunka. Sida malaayiin Mareykan ah, waxaa kugu soo food leh halista dacwadaha maalin kasta. Tusaale ahaan, mar kasta oo aad gaadhigaaga gasho oo aad baabuur waddo ayaa lagu soo gaadhsiinayaa. Markasta oo aad macaamiil cusub la soo wareegto waxaad isku arki kartaa naftaada qareenka qareenkaaga. Waqti kasta oo qof uu lugeeyo hantidaada, adoo wata ogolaanshahaaga ama ma ogola, waxay kicin kartaa dagaal sharci darro ah.
Maskaxda ku hay, aadanaha ayaa ah kuwa qora sharciga. Maahan xoog cadaalad ah oo cadaalad ah cirka. Sidookale xasuusi naftaada shaqada kuwa qora sharciga. Siyaasiyiinta. Badankood waa qareenno. Markay qorayaan sharciyada, ma u malaynaysaa inay iyaga u qorayaan ama ka soo horjeedaan faa'iidadooda? Marka, waxa inala gudboon inay tahay tan. Wax kasta oo ku xayira qawaaniinta u roon qareenku inuu gacmahiisa ku haysto jeebkaaga, kaliya xishoodka xad gudubyada dadweynaha, waa habka sharci dejintu u qoreen sharciyada. Sharci-dajiyayaashu ma aysan qorin sharciyada "cadaalad" ujeedka ugu weyn. Shuruucda badankood waxaa ugu horeyn qoraa, iyo faa iidada, xubnaha xirfad sharciyeed.
Waxaan leennahay macmiil hore hodan u ahaa oo gabi ahaanba ay ka buuxaan dacwado taxane ah. Wuxuu ahaa a xubin ka mid ah guddiga agaasimayaasha bangiga. Mid ka mid ah shaqaalihiisa, meheraddiisa ugu weyn, ayaa bangiga kula taliyay macmiilkiisa. Shaqaalaha macmiilkayagu ma xusin in macmiisheena uu sidoo kale ahaa agaasime banki. Markii uu bangigu ku guul darreystay shilkii guryaha ayaa macmiilkiisii ​​dacwad ka oogay macaamiisheenna khiyaano.
Waxay ku dacweeyeen sababta oo ah shaqaalihiisa inuu si habsami leh u shaqeyn waayey si uu u ogeysiiyo mowqifkeenna bangiyeed. Nidaamkiisa caymiska ayaa diiday inuu difaaco maxaa yeelay dacwadda waxaa ku jiray ereyga "khiyaano". Bangiga wax lacag ah kama uusan siinin booskiisa. Si kastaba ha noqotee, Maxkamadda Sare ee Kaliforniya ayaa kaliya ku dhawaaqday xukun $ 2 + milyan oo doolar ka dhan ah macaamiisheenna. Nasiib wanaag isaga, waxaan gelinnay qorshe ilaalin hanti.
Shan sano oo dagaal ah kadib, wuxuu doortay inuu kaco. Keligiis wuxuu si sharaf leh gabadhiisa u geliyay kuliyad waxaana uu taageeray xaaskiisa, wiilkiisa iyo hooyadiis xanuunsan. Kaliya maahan in qareenka u adeegaya sida wakiilka kicinta ka xayuubiyey wax kasta oo aan lagu xirin. Wuxuu sidoo kale dacweeyay xaaskiisa, caruurtiisa iyo hooyadiis. Wuxuu ka dacweeyay wixii taageero ah ee ay ka heleen isaga afartii sano ee hore.
Haa, wakiilka masruufka wuxuu ku dacweeyay gabadhiisa lacagtii aabaheedii siisay kuliyada, guriyeynta, cuntada, iwm. Aad buu u careysnaa. Gebi ahaanba livid. Ma tahay “cadaalad” inay dacwad ka qaadaan gabadhiisa shakhsi ahaan tirada waalidkeed ku bixisay waxbarashadeeda? Malaha su’aasha saxda ah, ayaa ah, “Maxaa ku kacaya fursadaha ay qareennadu gacmahooda ugu gelinayaan jeebabka qof?” Weydiinta su’aashaas waxay badanaa kuu sheegi doontaa sida sharciga loo qoray. Oh, habka, qareenka u shaqeynaya sida wakiilka masruufka wuxuu heley seddex meelood meel boolidii.
Ha ku Aarin Caymiska
Waxyaabaha ka reeban ee lagu qoray siyaasadaha maanta waxay la mid yihiin daabacaadda wanaagsan ee birta iyo khiyaanada loo beddelo. Waxaan ku aragnay si isdaba joog ah marka macaamiisha ay ugu yeeraan sheekooyin xun. Qareennada badanaa waxay aruurin karaan sedex jeer magdhawga oo ay ku jiraan khidmadaha qareenka. Way sameyn karaan sidaas haddii ay ka dhaadhicin karaan garsooraha Robin Hood inuu jiray wax khayaano ah oo ay u ekaayeen. Natiijo ahaan, waxay inta badan ku tuuraan xariiq ama labo ku saabsan khayaanada dacwadda, sharci ama ma aha.
Marka, iyada oo aan loo eegin xirfaddaada, hal hubaal ayaa ah tan. Qorsheyso shaki la'aani marka ay timaado cidda ku dacweyn doonta kan ku xiga. Fur akoon dibadeed. Ku qabo koontada xafid ilaalin hanti ama shirkad. Isku-darkaani wuxuu ku siin karaa hab aad lacagtaada ku sii wadato. Waxaad si fiican u seexan kartaa habeenkii adigoo og in jawiga sharciga ee buuqa badan uusan saameyn ku yeelan doonin.
2. Kala-Qaybinta Hantida
Maxaa dhacaya haddii qof adiga kugu dacweeyo oo dacwadda isla markiiba ay xayirto dhammaan akoonnada bangiga Mareykanka? Lacag noocee ah ayaad u isticmaali laheyd inaad isku difaacdo? Sidee u bixin lahayd biilashaada? Waxaan leenahay shirkad shirkad qandaraasle ah. Midabka buluuga ah, hay'ad dawladeed ayaa timid oo xidhay isaga iyo lix ka mid ah shaqaalihiisa. Intaas ka dib, waxay xayiraan xisaabaadkiisa bangiga oo dhan; dhammaantood waxay ku xadgudbeen caymiska magdhawga shaqaalaha yaryar. Waxay macno ahaan wax fikrad ah ka hayn inay wax qalad ah sameeyeen.
Wuxuu sameeyay malaayiin doollar sanadkii. Si kastaba ha noqotee, xitaa ma uusan helin fursad uu ku helo lacagtiisa si uu damiin u helo. Waxay ku imaaneysaa iyadoo aan xitaa laheyn inuu haysto awood uu ku shaqaaleysiiyo qareen difaacaya. Garsoorayaasha Mareykanka ma laha awood ay ku joojiyaan xawaaladaha degdega ah akoontiga dalal kale. Gaar ahaan tani waa kiiska haddii baanka uusan laheyn laamo u dhigma Mareykanka; intaa ka sii badan haddii lagu haysto meel aamin ah oo dhinaca badda ah.
Markaad haysatid xoogaa lacag ah oo dibedda ah waxay ku siineysaa awood aad kaga hor istaagto inuu qof ku murugoodo suulka. Waxay kaa caawin kartaa ka hortagga cadawga sharciga ah ama sarkaal xad dhaaf ah inuu si xun u dacweeyo. Difaacan la'aantooda, waxay si lama filaan ah uga bixi karaan roogaga hoostaada, iyagoo kugu qasbaya inaad ku dhacdo naxariistooda. Waxay kuu gelineysaa xakameyn waxayna kugu caawineysaa inaad ku fadhiiso kursiga darawalka lacag aad u kasbatay inaad shaqeyso.
Ikhtiyaaraadka Maalgashiga Dheeraadka ah
Qoraal kale, waxaa laga yaabaa inaad hore uga sii horraysay qalooca dhaqaalaha. Waxay u egtahay inaad tahay haddii aad raadineysid qaab kale oo maalgashi ah iyo qaabab fiican oo aad ku maareyn karto lacagtaada. Iyo, sida ugu badan, waxaad idaacadaha wararka ee soo noqnoqda sida: CNN, MSNBC, Fox, Bloomberg ama YouTube. Waxaad u arki kartaa iyaga si ay ula socdaan isbeddelka dhaqaalaha iyo xaaladda suuqa saamiyada.
Ciyaartoyda maaliyadeed ee waaweyn sida Warren Buffett, George Soros, iyo Dr. Michael Burry (Aasaasaha Scion Capital, LLC) waxay ahaayeen kuwa ka mid ah saadaaliyayaasha kaliya ee khasaaraha guryaha 2008 ee Mareykanka. Waxay ku dhawaaqayaan digniino ku saabsan Murugada weyn ee soo socota iyo burburka doolarka Mareykanka. Waxay hadda dhahaan waa ubax, laakiin ma yaqaanaan goorta.
Waxaa laga yaabaa inaad horeyba u ogtahay in Buffett iyo Soros ay lacag kaash ah ka qaateen Bangiyada Mareeykanka dhowr sano. Bangiyadii maal gashaday wax badan kama aysan baran hunguri xumada iyo khayaanada ay ku kaceen dadka Mareykanka. Intaa waxaa sii dheer, waxay filayaan in kale sii deyn lacageed. Markan, waxaa jiri kara ma noqon damiin ay bixiso dowladda Mareykanka maxaa yeelay dowladda Mareykanka waxaa laga yaabaa inay heysato lacag ku filan oo ay ku bixiso.
Maraykanku waa waddanka deynta ugu badan ee adduunka ah. Tirada deynta ayaa ah kan ugu sarreeya abid soo martay waddan kasta ee taariikhda adduunka. Dhab ahaan, waxaa jira bogag internet oo aad ku socon karto Deynta Mareykanka waqtiga dhabta ah. Khubaradu waxay saadaalinayaan in lacagtaas xitaa aan dib loo bixin karin sanadihii 40. Inteena ugu badan waa inaan wajahno xaqiiqda miyir-qabka ah ee aan ka maqneyn Heshiiska Ganacsiga ee ISDA sidaa darteed waxaan noqon karnaa qarsoodi sirta ah ee wiilasha waaweyn. Marka, waxa ku xiga ee ugu fiican ee inteena kale aan sameyn karno waa in aan ilaashanno lacagtooda gudaha koontada dibedda
3. Nidaamka Bankiga Sare
On Maaliyadda Caalamiga ahWarbixintii ugu dambaysay, ee la yiraahdo, "Bangiyada 50 Safest Banks" ee adduunka, ma jirin bangiyada magac weyn ku leh Mareykanka xitaa liistada ayaa sameeyay - midna kama mid ahayn. Ka baxsan Bangiyada 50 ee Mareykanka ayaa leh kaliya liistada liiska. Saddex bangiyo yaryar oo beeraha ku saleysan oo darajadooda lagu soo gaabiyo #30, #45 iyo #50 ayaa ah kuwa kaliya ee bangiyada Mareykanka sameeyay. Waxaa jira weedh ay isticmaalaan iyaga oo kaashanaya bangiyada waaweyn ee Mareykanka si ay ugu sharraxaan masiibada soo socota ee la saadaaliyay inay dhici doonto: Aad u weyn oo aan lagu guuleysan karin. Tani kama sii dheeraan karto runta.
Marka bangiyada bilaabaan inay noqdaan khaldan (oo aan awoodin in ay bixiso deymaha) sababtoo ah deyn aad u sarreeya oo aan lahayn meel ay waqtigaan u noqdaan damaanad dowladeed, lacagta ku jirta maalgashigaaga ayaa lumin doona. Gooni.
Bangiyadu waxay u adeegsan doonaan keydadkaaga inay ku bixiyaan deynta u gaarka ah. Sida wixii dhowaan ka dhacay Giriigga, bangiyadu way xiri doonaan. Intaas ka dib, ma awoodi doontid inaad lacag ka qaadatid ATM-ka sababtoo ah lacag kaa hadhayaa ma jirto. Qof ayaa si qalad ah u dhihi kara, "Haa laakiin waa sidee haddii aan lacagtayda u dhigo meeshaas oo ay isla wax dhacaan?"
Halkaas ayaanu ku nimid. Waxaan baaritaan ku samaynaa bangiyada ugu adag uguna amaanka badan aduunka waxaanuna ku sameynaa talooyin badan oo ku saleysan xogta dhaqaalahooda. Bangiyada kaliya kama boodaan liiska “kuwa ugu amaanka badan adduunka” oo waxay kujiraan ismaandhaaf halsano ah. Laakiin maxaa dhacaya haddii qofku lacag badan ku haysto bangiga uusan ku jirin liiska "ugu ammaansan"? Markaa ka warran haddii bangigu ku yaallo deynta ugu badan ee adduunka? Hadda, taasi waa sabab walaac dhab ah leh.
Khatar Hore: Qaado Daboolka Xeebta
Ciyaartoy badan oo waaweyn oo dhaqaale iyo dhaqaalayahanno ah ayaa ka digaya doollarka dumay. Burburkan ayaa u sabab ah deynta cilmiga astronomical, qiimaha jiidista qiimaha shidaalka ee dhaqaalaheena iyo sicir bararka. Sida laga soo xigtay Thomas Metcalf, oo ah dhaqaaleyahan, liis gareynaya iyo qoraaga wax ku oolka ah ee bogga internetka maaliyadda, Zacks, "Heerka Bartilmaameedka Federaalka ee sicirbararka waa 2 boqolkiiba. Marka sicir-bararku hoos uga dhaco bartilmaameedka oo aan muujin wax calaamado ah oo la qaado, kaydka Federaalka iyo dhaqaaleyahanno badan ayaa muujiyay walaac dhab ah. Iyada oo heerka sicir-bararka hoos u dhaco, ma caawin kartid laakiin waydiiso waxa dhacaya haddii ay hoos u dhacdo eber. Taasi waa dareenka dhaqaalaha. "
Lacagtaada ku rid hudheel ammaan ah, taas oo aan ku jirin bangiyada waaweyn ee Maraykanka, oo aan ahayn hanti Maraykan ah, oo badanaa ku xidhan bangiyada Maraykanka. U qaybi qayb ka mid ah maal gashigaaga meel aamin ah, sharci ah, koontada dibadda mid ka mid ah bangiyada ugu ammaansan adduunka.
4. Yaraanta Nuglaanta
Weligaa ukuntaada oo dhan hal dambiil ha ku ridin. Haddii aad sidaas sameysid, waxaad si weyn u kordhineysaa fursadahaaga lumista lacagtaada iyo maalgashigaaga. Marka, hadaad ku sugan tahay meherad oo lagaa yaabo in lagu dacweeyo wakhti kasta, waxaa fikrad fiican ah inaad hantida qaar u guurto meel aamin ah oo aan laguugu xiri karin. Haddii aad xaas tahay, haddii aad keligaa tahay oo aad reer leedahay ama haddii aad tahay qof fikir horusocod leh, lacag u dirista xeebaha waa hab caqli badan oo lagu yarayn karo dayacnaantaada dhaqaale.
Runtii, waan jecel nahay oo daryeela xubnaha qoyskeena. Si kastaba ha noqotee, taasi micnaheedu maahan inaan u baahan nahay inaan u adeegsanno dhaxalkeenna si aan u bixinno deymaha oo dhan markay dhaafaan. Xubnaha qoyska ka badbaaday ayaa mas'uul ka ah bixinta bixinta deymihii uu jeclaa kuwii dhintay ee ay lahaayeen hantida uu ka dhintay. Qoondaynta lacagta qoyska koontada dibedda, oo lagu haysto aaminaad dhinaca dibedda ah, waxay ka ilaalin kartaa curadnimadaada dhalashada in la tirtiro geerida ka dib qofkii aad jeclayd.
5. Nabada Mind
Ha ku dhaadhacin markab qallafsan.
Doug Casey, oo ah qoraaga dhaqaale iyo dhaqaaleyahanka suuqa xorta ah ayaa is barbardhigay (fallaadhkii Maraykanka) iyo dayrta Boqortooyada Roomaanka. Casey wuxuu yiri, "Kama saari karno sharciga labaad ee thermodynamics, kaas oo haysta in entropy-ku guuleysto wax kasta iyo in waqti ka dib dhammaan nidaamyada hoos u dhigo iyo hoos u dhacaan. Iyo in nidaamku uu noqdo mid aad u adag, oo ah tamar badan oo ay qaadato si loo ilaaliyo. Qodobka ugu weyn iyo kan ugu adag, isku xirnaanta, iyo isku xirnaanshaha waxa uu noqonayaa, in ay sii xumaato inay tahay burbur iyo fashfashaad la'aan. Taas waxaa ka mid ah wadamada iyo dhaqamada. "
Ama, waxaan soo xigan karnaa kooxda muusigga caanka ah, Dhiiga, Dhididka iyo jeexjeexyada, "Maxaa soo kici doona waa inay timaado."
Caalami + Maxalli = "Glocal"
Waxaa jira xiddig filim 2009 ah oo jilaya George Clooney, oo cinwaan looga dhigay Up at Air ah. Waxaa ku jira, nin da 'yar, hammi leh, helana, Natalie Keener, oo ay ciyartay Anna Kendrick wuxuu ku nuuxnuuxsaday ereyga "sharaf." Odayaasha Anna, oo uu ku jiro Mr. Clooney, ayaa ku wareersan eraygan. Anna waxay markaa sharraxday in “glocal” ereybixin cusub oo loo adeegsado qeexitaanka midaynta labada suuqa caalamiga ah iyo kan maxalliga ah.
Glocal wuxuu muujinayaa in dunidu ay yar tahay sababtoo ah tiknoolijiyada, ganacsiga xorta ah iyo guud ahaan ganacsiga ganacsiga. Ama ha ku boodin baabuurka dhexdiisa iyo balaarinta cirbadahaada, ama ka tag. Haysashada maskax fiican oo maantadan ah iyo da 'aan daarneyn mar dambe - waa lagama maarmaan. Bangiga bangiga waxay bixisaa siyaabo aad u muhiima oo siyaabo macquul ah oo loo ballaariyo horgalarka maalgashigaaga.
Waxaa hareeyay khiyaamo aad u fara badan, khayaano, khalkhal iyo xatooyo ay sameeyeen hayadaha bangiyeed ee Mareykanka. Isla sidaas oo kale ayaa loogu talagalay ciyaartoyda suuqa saamiyada iyo 'Federal Reserve'. Waxaynu wajahaynaa isku-darka arrimaha dhaqaale ee kor lagu soo sheegay ee gudaha iyo kan 'adduunkaba'. Tani waxay ka dhigeysaa duufaankii ugu fiicnaa burbur kale oo dhaqaale.
Wac nambarka ama foomka baaritaanka dhameystiran ee ku yaal boggan si aad u hesho taageero iyo caawimaad. Samee baaristaada. Naftaada ka fikir oo ka fikir dibedda sanduuqa — iyo - ka fikir dalka dibaddiisa. Ha noqon dhibbane nidaamka bangiyada Mareykanka. Keenso oo ku hay qaar ka mid ah lacagahaaga akoonka bangiga dibadiisa.
<Illaa cutubka 1
Ilaa cutubka 3>